देशभर भारि वर्षा संगै बाढी र पहिरो आएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी हेलिकप्टर सहित रेडी पोजिसनमा! – Etajakhabar
देशभर भारि वर्षा संगै बाढी र पहिरो आएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी हेलिकप्टर सहित रेडी पोजिसनमा!
मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकमा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोक्न तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकाय ‘हाइ अलर्ट’को अवस्थामा रहेका छन् । विपद जोखिम न्यूनीकरण, तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि बाढीबाट प्रभावित मुलुकका २४४ स्थानलाई उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सरकारी क्षमताले भ्याएसम्मका तयारी गरिएको छ । मुलुकको पहाड र हिमाली क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ भने तराई डुबान, कटान र बाढीको जोखिममा छ । भइपरि आउने घटनाको क्षति न्यूनीकरण, राहत र उद्धारका लागि सबै निकायको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
मौसम सूचना प्रणाली प्रभावकारी : मौसम तथा नदीमा बाढी सतहको पूर्व जानकारी दिन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र बाढी महाशाखाले सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ । मौसमविद् समिर श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा तीन दिनसम्मको मौसमको जानकारी दिन सकिने अवस्था रहेको केही महीनाभित्रमै मौसमको कुनै खतरा हुने वित्तीकै मोबाइलमा सन्देश पठाउन सक्ने गरी प्रविधिको विकास गर्न लागिएको छ । यसले अझै मौसमको जानकारी थप प्रभावकारी हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार विभागले नदीको जलाधारक्षेत्र मध्य २४४ जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यमध्ये मुख्य नदीमा हुने बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिएको छ । पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस प्रणालीदेखि वेबसाइटबाट जानकारी दिने तथा खतरा र चेतावनीको सूचनाका लागि साइरन बजाउनेसम्मका काम भैरहेको छ । आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा बदली हुने र धेरै स्थानमा वर्षा हुने विभागको सूचना प्रणालीमा उल्लेख छ । खासगरी पूर्व र मध्यक्षेत्रका केही स्थानमा भारी र पूर्व क्षेत्रका तराई र मध्य पहाडका थोरै ठाउँमा अति भारी वर्षा हुने र केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ । राती पनि मौसम बदली भई धेरै स्थानमा वर्षा हुने छ । तीन दिनसम्मै यो क्रम जारी रहने विभागले जनाएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयका तयारी : विभिन मन्त्रालयले समेत विपद् जोखिम कम गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ । आफ्नो मातहतका निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन लगाउनेदेखि उचित समन्वयका लागि तयारी अवस्थामा रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना २०७६ मा ती मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुनमा हुनसक्ने जोखिम कम गर्न स्थानीय तहलाईसमेत उच्च सतर्कताका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त राख्ने, स्थानीय क्षेत्रमा क्रियाशील विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरी खाद्यान्न, राहत सामग्री औषधोपचारका लागि तयारी गरेको जनाएको छ ।
सुरक्षाकर्मी पूर्ण तयारीमा : नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक तयारीमा बसेको छ ।विपद्को छोटो समयमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन हुने गरी विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले १ नं विपद् व्यवस्थापन गणलाई काठमाडौँ र पूर्वतर्फको प्रदेश हेर्ने तथा २ नं गणलाई चितवन तथा पश्चिमतर्फको प्रदेश हेर्ने गरी तालीमप्राप्त उद्धारकर्ता तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसका लागि सेनाले आकस्मिक उद्धार टोली ५६१ जनशक्ति तयारी गरेको छ । अन्य एक हजार ७८२ जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् भने हरेक क्षेत्रबाट आवश्यकताअनुसार टोली खटिन सक्ने नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । गण भएको जिल्लामा १०४ र गुल्ममा ३० जना तैनाथ हुन्छन् । नपुग भए माथिल्लो तहबाट थप हुन्छ ।
Posted on: Friday, July 12, 2019 Time: 16:38:48